Tesla က ၎င်း၏ Model S ပိုင်ရှင်အား တရားစွဲခြင်းသည် ဂုဏ်ထူးဆောင်အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေး - Pandaily
Sep 28, 2021, 18:40ညနေ 2021/09/28 20:03:43 Pandaily
Tesla ကားပိုငျရှငျတဈဦးဟာ အရငျက ယာဉျမတျောတဆမှုကွီးတှေ ဖွဈပှားခဲ့ဖူးတယျလို့ သိရတဲ့ Tesla Officer Network ကနေ Tesla Mdel S ကို ဝယျယူခဲ့ပွီးနောကျ Tesla ကားဟောငျးကို တရားစှဲတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ Tesla ၏ နောက်တွင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် ကားပိုင်ရှင်သည် ငွေပြန်အမ်းငွေ ၃၇.၉၇ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၁၃.၉၁ သန်း) နှင့် ဥပဒေအရ နစ်နာကြေးအဖြစ် ၁၁၃.၉၁ သန်း နှင့် nbsp; – စုစုပေါင်း လျော်ကြေးငွေ ၁၅၁.၈၈ သန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လတ်တလောမှာတော့ ကားပိုင်ရှင်က Tesla ရဲ့ လျော်ကြေးငွေကို အခုချိန်ထိ မပေးရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ Tesla ကုမ်ပဏီကို တရားစှဲခဲ့ပွီး သူ့ကိုဥက်ကဌကွီး ကွညျသနျး၏ ပွောဆိုခကျြ ၅၀၅ ခ ခြိုးဖောကျခံရလျော်ကြေးငွေ (၇၈၁,၆၈၅) ဒေါ်လာကို ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့Tesla က Weibo မှတစ်ဆင့် တုံ့ပြန်ခြင်းTesla ကားပိုင်ရှင်နှင့် မစ္စတာဟန်ဒါတို့အကြားတွင် ကားဟောင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းနှင့် ကားပိုင်ရှင်များ (ကုမ္ပဏီ) က ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်မှု စသည်တို့ဖြင့် အငြင်းပွားမှု ငါးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဆိုထားသည်။
အထကျပါဝတျစုံနှဈခုအပွငျ – Tesla ဟုအမည်ရသည့် လိမ်လည်ရောင်းချမှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် ဟန်ဒါဆင်ဆိုသူက ၁၅၂ သန်းနှင့် Tesla Tesla Tesla Hospitals of Honor & nbsp – ပြင်ပတွင် တတိယမြောက် အမှုဖြစ်သည့် S&nbsp ကို ရည်ညွှန်း သည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း Tesla သည် ဂုဏ်ထူးဆောင်ငြိစွန်းသည့် အငြင်းပွားမှုများကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Tesla က ယခုဖြစ်ရပ်ကို ကြားနာလျက်ရှိကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ကျန်အမှုနှစ်ခုသည် Tesla ကားပေါ်တွင် အခမ်းအနားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းကားပေါ်တွင် ဟန်ဝင်းအောင်အား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ Tesla Han က ယင်းကားနှစ်စီး ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အခမ်းအနားကျင်းပစဉ် ကာလကြာမြင့်စွာ နေရာယူထားသော ကားနှစ်စီး ပြန်လည်အပ်နှံရန် သဘောတူခဲ့သော်လည်း စာချုပ်ပါအတိုင်း ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း မပြုဘဲ ကားနှစ်စီး ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ဒုတိယကားသည် လက်ဆောင်ယူနေစဉ် ကာလအတွင်း တောင်ကိုရီးယား၏ ဆွေမျိုးများက ယင်းယာဉ်ကို တိုက်မိခဲ့ပြီး ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း Tesla က ယင်းနေ့တွင်ပင် အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကားကုမဏီကလညျး သညျအမှုနှဈခုကို ကွားနာ စဈဆေးနပေါတယျ။
Tesla က Weibo ပို့စ်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားရာတွင် “ဒီ Official Account ကို စတင်ထူထောင်ကတည်းက Tesla ဟာ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ် တွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကနြျောကတော့ ဥပဒေ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို လိုကျနာဖို့၊ တရားစီရငျရေးကို လေးစားလိုကျနာဖို့၊ လှတျလပျတဲ့ တရားစီရငျရေးကို အမွဲလိုကျနာဖို့၊ မလှတျလပျတဲ့ အမှုတှကေို အသေးစိတျ ဖျောထုတျဖို့ စတဲ့ အမှုအခငျးတှကေို ရုံးတငျ စဈဆေးတာ၊ ကွားဝငျကိုငျတှယျခွငျး မပွုဘဲ လူထုအမွငျနဲ့ ဆောငျရှကျတဲ့ ကိစ်စမြိုးပါ။ ကနြျောတို့ မြှျောလငျ့တာကတော့ တရားရုံးကို အယုံအကွညျမရှိတဲ့အတှကျ နောကျဆုံးမှာ တရားဥပဒအေတိုငျး စီရငျသှားမှာပါ” ဟု ပွော သညျ။
Tesla, Teslaယာဉျပိုငျရှငျ ကိုဟနျဝငျးအောငျ က Weibo မှာ အခုလို၊ “ကြှနျတျောနဲ့ Tesla ကို တရားစှဲထားတာ ၅ ယောကျရှိပါတယျ. တတိယမွောကျ၊ စတုတ်ထမဏ်ဍိုငျကိုတော့ အမှုတှဲအဖွဈ ပွနျအပျသငျ့ပါတယျ. အမှနျတော့ Tesla က ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အခှငျ့အရေးအတှကျ ကုနျကစြရိတျကို အမှုတှဲနှဈခုခှဲပွီးတငျလိုကျတာပါ.. အမှုတှဲအတှကျ တရားဆှဲဆိုမှုစရိတျကို နှဈဆ ပေးရတော့မယျ၊ ကြှနျတေျာ့ရှနေ့တှေနေဲ့ အခှငျ့အရေးအတှကျ အခြိနျထပျပေးရဦးမယျ၊ ရုံးတငျစဈဆေးတဲ့ အခြိနျနဲ့ အမှုစဈဆေးတဲ့ အခြိနျတှလေညျး နှဈဆပေးသှားမှာပါ”။
ဒါ့အပွငျ ယာဉျပိုငျရှငျတှကေလညျး Weibo ကနေ တဈဆငျ့ ယာဉျမတျောတဆမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှငျးပွခဲ့ကွပါတယျ။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကလည်း ယင်းယာဉ်နှစ်စီးကို တရားမဝင်သိမ်းပိုက်မှုမပြုရန် ပြည်နယ်ဈေးများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးမှူးရုံးသို့ ခွင့်ပြုချက်တင်ကာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ယာဉျမတျောတဆမှုဖွဈစဉျအတှကျ ယာဉျမောငျးသူရဲ့ဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေို လကျဆောငျပေးတာ၊ ယာဉျပိုငျရှငျက သတိမထားမိတာနဲ့ သကျဆိုငျရာထိနျးသိမျးစရိတျကိုယူဖို့ ကမျးလှမျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကားပိုငျရှငျက Tesla ကို မေးမွနျးရာမှာ ယာဉျမတျောတဆ ဖွဈမှုနဲ့ပတျသကျပွီး လကျဆောငျအနနေဲ့ သိနျး ၂၀ ပေးထားရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ “ဒီကားရဲ့ တန်ဖိုးက သိန်း ၂၀ ကျော်ပဲရှိတယ်”လို့ သူက ပြောခဲ့သလို ဒီကားရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဈေးနဲ့ကောက်ချက်ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူထင်မှတ်ထားတာဟာ အသုံးမကျပါဘူး။
Topics: မွငျကှငျးTesla ၏ လိမ်လည်မှုကြောင့် ငွေပြန်အမ်းသည့် Model S ပိုင်ရှင်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
Tesla သည် ၎င်းနှင့် ကားပိုင်ရှင်များကြား အငြင်းပွားမှုများစွာလည်း ရှိနေသည်။Economic Watch သတင်းစာတရုတျအှနျလိုငျးစုံစမျးမှုအတှငျး တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ စီရငျခကျြတှဟော Tesla ရဲ့ တရုတျတရားရုံးတဈရုံးလုံးမှာ ရာနဲ့ခြီတဲ့ တရားစှဲဆိုမှုမှတျတမျးတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ သတင်းထောက် “Tesla Tesla ” (“Right to Share” (သို့မဟုတ်) “Share” ဟု စွပ်စွဲခံရသူကို ရှာဖွေရာတွင် စုစုပေါင်း တရားဆွဲဆိုမှု ၂၅၀ ကျော်ရှိသည်။ Tesla ဟာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ တရားစှဲခံထားရတဲ့ ကုမ်ပဏီတှထေဲမှာ မကွာခဏဆိုသလို စြေးလြှော့၊ စြေးလြှော့၊ စြေးလြှော့လိမျလညျမှုနဲ့ စှပျစှဲခံရတဲ့အပွငျ ကားခဈြပျဗားရှငျး အတုတှေ ပရိုမိုးရှငျးလုပျလာပါတယျ။